तपाईं शरीर मा एक papilloma छ? तिनीहरूलाई छुटकारा प्राप्त गर्न कसरी, यो लेख भन्नेछु। तर घरेलू प्रक्रियाहरु कुनै पनि मामला मा सुरक्षित हुनुपर्छ। छाला घाउ, यो थियो, यो आवश्यक छ जो malignancy को शक खारेज गर्न एक दृश्य संग जाँच्न कि भूल छैन। हो र लापरवाह हेरफेर विपत्तिजनक परिणाम निम्त्याउन सक्छ।
संक्रमण - यो warts को मुख्य कारण हो। र यो धूर्त रोगजनक हाम्रो ग्रह को सबै बासिन्दाहरू कम्तिमा 80 प्रतिशत संक्रमित। उहाँले यौनजन्य। तर रोग को विकास नियम, प्रतिरक्षा घट्यो, provokes। को गति एक चिसो अधिक लगे जीवाणुरोधी लागूऔषधको पाठ्यक्रम, गर्भवती हुन सक्छन्। र तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य ख्याल भने, यो राम्रो papillomas को घटना रोक्न छ। बलियो प्रतिरक्षा प्रणाली कायम, मोड पालन र निद्रामा र खाना, पेय भिटामिन व्यायाम र उछाल रोक्न छैन।
तर तपाईंले पहिले नै के भने सोच papillomas छुटकारा कसरी गर्न घरमा? विभिन्न विधिहरू छन्। निस्सन्देह, धेरै व्यावहारिक एक त्वकरोग परामर्श गर्न। विशेषज्ञ, प्रयोगशाला परीक्षण सञ्चालन हुनेछ उपचार को एक पाठ्यक्रम सल्लाह दिन्छन् हुनेछ जो को परिणाम आधारमा। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं प्रक्रिया cryodestruction पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। यो विधि पीडारहित छ। Papillomas चिसो द्वारा हटाइएका छन्। एक हप्ता पछि तिनीहरूले आफै गायब हुनेछ, र छाला मा निशान रहने छैन। तर तपाईं घरमा papillomas उन्मुक्ति कसरी सोच हो भने, तपाईंले एक फार्मेसी विशेष संरचना मा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यो छाला डट सफा लागू गर्नुपर्छ। यसलाई स्वस्थ क्षेत्रमा गर्दा लो छैन महत्त्वपूर्ण छ।
तपाईं पनि गर्भवती संरचना विनाशकारी विशेष स्ट्रिप्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईं घरमा papillomas उन्मुक्ति कसरी थाहा छैन भने। तिनीहरू केवल केहि र ट्यूमर को क्षेत्रमा छाला लीन र तीन घण्टा राख्न आवश्यक छ। त्यसपछि पट्टी को बाहिरी सतह भिजेको रुमाल गर्नुपर्छ र painlessly papillomas साथ हटाइएको छ।
जो मान्छे चाहनुहुन्छ थाहा papillomas उन्मुक्ति कसरी बस लोक उपचार रुचि, घर मा। तपाईं एक जलीय वा मादक जलसेक को रूप मा एक सैलंडन खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई लागू अघि छाला सोडा समाधान, तातो, तर न्यानो छैन को स्नान मा स्टीम गर्न सिफारिस गरिएको छ। नामेट ट्यूमर वास्तवमा सात दिन छ।
तपाईं घ्यु पात प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं मात्र पाँच वर्ष पुरानो थियो जो बिरुवाहरु, तिनीहरूलाई चयन गर्न आवश्यक छ। एक साना उमेर मा, तिनीहरूले keratolytic गुण छैन, किनभने बस बेकारी छन्। पातहरू अनुदैर्ध्य फाइबर पर्याप्त धारिलो चक्कु साथ कटौती गर्नुपर्छ। कट समस्या क्षेत्रमा लागू र चार घण्टा प्लास्टर निश्चित छ। 10 दिन पछि, तपाईं warts उन्मुक्ति।
कृपया पनि समस्या समाधान याद गर्नुहोस्, तपाईं यसलाई फेरि देखापर्ने छैन कि एक ग्यारेन्टी प्राप्त छैन। यो विशिष्ट रोकथाम ध्यान त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ। जस्ता को एक उच्च सामग्री संग भिटामिन चिकित्सा को एक पाठ्यक्रम आवश्यक छ। उपयोगी र antiviral लागूपदार्थ, तर केवल आफ्नो डाक्टर संग बोल्ने पछि। सामान्यीकरण मोड, छाला को हेरविचार, यो आंतों microflora अवस्था जाँच गर्न उपयोगी छ। सबै छ। अब तपाईं papillomas छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छन् कि थाहा छ।
फरक hemorrhagic vasculitis के हो?
मस्तिष्क blastoma: लक्षण, पूर्वानुमान
के सीढी को तत्व घरमा एक भित्री सिर्जना गर्न मद्दत छन्
को औंलाहरु मा पानी जस्तो blisters: लक्षण र उपचार